Kuyini ukungathandwa kwabathelisi esikubona? Teh Umlando Nezibonelo Zangempela Zomhlaba ze-AR
Ngokombono womthengisi, ngikholelwa empeleni ukuthi ukungathandwa kwabathelisi esikubona kunamandla amaningi kunokuthola iqiniso langempela. Yize iqiniso elibonakalayo lizosivumela ukuthi sizwe okuhlangenwe nakho okungekuhle ngokuphelele, iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona lizothuthukisa futhi lihlanganyele nomhlaba esihlala kuwo njengamanje. Sabelane ngaphambilini I-AR ingathinta ukumaketha, kodwa angikholwa ukuthi sichaze ngokuphelele iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona futhi sanikeza nezibonelo.
Okusemqoka kokumaketha ukuthuthuka kobuchwepheshe be-smartphone. Ngobubanzi bomkhawulokudonsa, isivinini sekhompiyutha esaphikisana nama-desktops eminyakeni embalwa edlule, futhi inkumbulo eningi - amadivayisi we-smartphone avula iminyango yokwamukelwa kwangempela nokukhula. Empeleni, ngasekupheleni kuka-2017, ama-30% wabasebenzisi be-smartphone basebenzise uhlelo lokusebenza lwe-AR… ngaphezulu kwabasebenzisi abayizigidi ezingama-60 e-US kuphela
Yini i-Augmented Reality?
Okungokoqobo okungathandwa kwabathelisi esikubona ubuchwepheshe bedijithali obondla umbhalo, izithombe noma ividiyo ezintweni ezibonakalayo. Kumgogodla wayo, i-AR inikeza zonke izinhlobo zolwazi ezifana nendawo, isihloko, idatha ebukwayo, yomsindo nokusheshisa, futhi ivule indlela yempendulo yesikhathi sangempela. I-AR inikeza indlela yokuvala igebe phakathi kwesipiliyoni somzimba nesedijithali, inika amandla ama-brand ukuthi ahlanganyele kangcono namakhasimende awo futhi aqhube imiphumela yangempela yebhizinisi kule nqubo.
I-AR isetshenziselwa kanjani ukuthengisa nokumaketha?
Ngokombiko wakamuva ka-Elmwood, ubuchwepheshe bokulingisa obufana ne-VR ne-AR busethwe ukuthi bunikeze inani elisheshayo ikakhulukazi lemikhiqizo yokuthengisa neyabathengi ezindaweni ezimbili ezibalulekile. Okokuqala, bazokwengeza inani lapho bethuthukisa khona ulwazi lwekhasimende lomkhiqizo uqobo. Isibonelo, ngokwenza imininingwane eyinkimbinkimbi yomkhiqizo nokunye okuqukethwe okubalulekile kuhlanganyele kakhulu ekwenzeni i-gamification, ukuhlinzeka nge-step-by-step coaching, noma ngokunikeza izikhombisi zokuziphatha, njengasesimweni sokunamathela emithini.
Okwesibili, lobu buchwepheshe buzoqala lapho bungasiza khona imikhiqizo ukwazisa nokuguqula indlela abantu abayibona ngayo le nkampani ngokukhiqiza okuhlangenwe nakho okucebile, okusebenzisanayo kanye nezindaba ezicindezelayo ngaphambi kokuthenga. Lokhu kungafaka ukwenza ukupakisha isiteshi esisha sokuzibandakanya, ukuvala igebe phakathi kokuthenga ku-inthanethi nangokwenyama, futhi wenze ukukhangisa kwendabuko kuphile ngezindaba ezinamandla zomkhiqizo.
Izibonelo Zokusetshenziswa Kweqiniso Kwe-Augmented Revenue Zokuthengisa Nokumaketha
Umholi oyedwa yi-IKEA. I-IKEA inohlelo lokusebenza lokuthenga olukuvumela ukuthi uzulazule kalula endabeni yabo futhi uthole imikhiqizo oyikhombe ngenkathi upheqa ekhaya. Nge IKEA Indawo ye-iOS noma ye-Android, uhlelo lwabo lokusebenza oluvumela abasebenzisi ukuthi "babeke" imikhiqizo ye-IKEA esikhaleni sakho.
I-Amazon ilandele isibonelo nge Ukubuka kwe-AR ye-iOS.
Esinye isibonelo emakethe isici sikaYelp ku- uhlelo lokusebenza lweselula kubizwe uMonocle. Uma ulanda uhlelo lokusebenza bese uvula imenyu ethe xaxa, uzothola inketho ebizwa ngokuthi Monocle. I-Open Monocle ne-Yelp zizosebenzisa indawo okuyo, ukuma kwefoni yakho, nekhamera yakho ukumboza idatha yazo ngokubukeka ngokubuka kwekhamera. Kuhle impela - ngiyamangala ukuthi abakhulumi ngayo kaningi.
Ama-AMC Theatre ahlinzeka nge- isicelo mobile lokho kukuvumela ukuthi ukhombe iphosta bese ubuka ukubuka kuqala kwe-movie.
Isibonakaliso yethule izibuko ezisebenzisanayo zezitolo ezidayiswayo lapho umsebenzisi angabona khona ukuthi bazobukeka kanjani ngezimonyo, izinwele, noma izinto zesikhumba ezifakiwe. sephora ukhiphe ubuchwepheshe babo ngohlelo lweselula.
Izinkampani zingasebenzisa izinhlelo zazo ezingokoqobo ezingathandwa kwabathelisi esikubona zisebenzisa I-ARKit ye-Apple, I-ARCore ye-Google, noma IHololens yeMicrosoft. Izinkampani ezidayisa nazo zingasizakala I-SDK ye-Augment.
Iqiniso elenziwe ukungathandwa kwabathelisi esikubona: Okwedlule, Okwamanje, nekusasa
Nasi ukubuka konke okuhle ku-infographic, Kuyini ukungathandwa kwabathelisi esikubona, eklanywe ngu Amamephu.
Tags: aremakethe arUkungathandwa kwabathelisi esikubonaincazelo engokoqobo engathandwayoikusasa noma i-arumlando we-arikhathalogi ye-ikeaikhathalogi ye-ikeaama-vexelsyini i-aryini iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubonaUhlelo lokusebenza lweselula lwe-yelpi-yelp monocle
Izinzuzo ezi-4 zamaMicro-Influencers
Ukukhiqiza Okunamandla: I-AI-Powered Omnichannel Ukwenza ngezifiso Ubuchwepheshe